Iimpawu ezivela kumbhali uAyn Rand kwiNkolo
Unqulo & Umoya Imizila kunye neeHososcopes
Ii-Famous Ayn Rand Quotes kwiNkolo
Ukufumanisa izimvo zakhe ngokholo nangesizathu
Umbhali uAyn Rand wabelelwa kwintsapho yamaYuda aseRussia, kodwa wayengumntu okholelwa kuThixo ongathethiyo ngokucacileyo malunga neembono zakhe zonqulo . Iimbali zombini zeRandi kunye nokungabikho kwemali ziye zanceda ukuphakamisa i-worldview yayo, eyaziwa njengengqondo.
Ngokwale nfilosofi, ukufezekiswa kombandela othile kuqala kwaye phambili. Abaninzi baseNtshona baye bamkela i-Rand view world because of their connection to capitalist, ekwazisa ngokuphumelela komntu ngamnye.
Ngaba ufuna ukuqonda okungcono imiboniselo yeRandi kwikolo ? Iingcaphuno ezilandelayo zikhanyisa indlela yakhe yokucinga.
IRandi yayivame ukuxubusha izulu, umhlaba kunye nehlabathi ngokubanzi. Ezi zicatshulwa ezintathu zingaphantsi kweembono zakhe.
Zibuze ukuba iphupha lamazulu nobukhulu kufanele silinde emangcwabeni ethu - okanye nokuba kufanele sibe ngabethu apha nangoku kunye nakulo mhlaba.
Kulo hlabathi, uya kuba nokuvuka ekuseni ngumoya owawuwaziyo ebuntwaneni bakho: lowo moya wokulangazelela, ukuhamba kunye nokuqinisekiswa okuvela ekujonganeni nomhlaba wendalo.
Ngaba uhlala kwindalo yonke elawulwa yimithetho yendalo kwaye, ngoko ke, isigxina, iqinile, iphela-kwaye iyafumaneka? Okanye ngaba ungeyinto engacaciswanga, ummandla wemimangaliso engaqondakaliyo, ukungaqiniseki, ukungaqondakali, engqondweni yakho engenakukwazi ukuyiqonda? Ubume bezenzo zakho - kunye nesifiso sakho - siya kuhluka, ngokwemiqathango yezimpendulo ozifumanayo.
IRandi yaxubusha nento awayeyibiza ngokuthi "iingcamango zomoya." Fumana ingcamango engcono yento athetha ngayo ngolu hlobo ngeempendulo ezilandelayo.
Okulungileyo, zithi iingcamango zomoya, nguThixo , inye yenkcazelo yakhe kukuba akukho ngaphaya kwamandla omntu okukhulelwa-inkcazo engavumelani nokuqonda komntu kwaye ilahlekisa ingcamango yakhe yokuphila ... Ingqondo yomntu, yitsho iingcamango zomoya , kufuneka ixhomekeke ekuthandweni kukaThixo ... Ixabiso lomntu loxabiso, lithetha iingcamango zomoya, lukholo lukaThixo, imilinganiselo yakhe ingaphezu kwamandla omntu okuqonda kwaye kufuneka amkelwe ngokholo .... Injongo Ubomi bendoda ... kukuba yi-zombie ephazamisayo osebenzela injongo ayengaziyo, ngenxa yezizathu ezingenakubuza. [Ayn Rand, For New Intellectual ]
Kwiminyaka emininzi, ubuxoki bomoya bubekho ngokukhusela i-racket-by making life on earth unableable, ngoko kukuhlajalela induduzo nokukhulula, ngokuthintela zonke iimbonakalo ezenza ukuba khona, ngoko ugibele emagxeni enetyala lakho, ukuvakalisa ukuveliswa kunye nokuvuyela ukuba yizono, ngoko ke ukuqokelela i-blackmail kuboni. [Ayn Rand, For New Intellectual ]
Ngethuba iRandi yayingenalo ukholo kuThixo, wayethetha ngobuhlobo phakathi kokholo noluntu. Wayeyibona njengelithintelo ekucingeni kunokuba ibe yinto efanelekileyo.
... Ukuba ukuzinikela enyanisweni kukuphawuleka kokuziphatha, ke akukho mkhulu kunabo bonke, inobomi obunamandla kakhulu kunokuzinikela komntu osithatha uxanduva lokucinga .... ukutshatyalaliswa okufutshane, olo lukholo, lusetyenzana kuphela olutshabalalisa ingqondo. [Ayn Rand, Atlas Shrugged ]
Inkolo, akukho-ngqiqo yenkolelo engakholelwayo, inkolelo engasetyenziswayo, okanye ngokuchasene nayo, inyaniso yenkcubeko kunye nezigqibo zesigqibo. Ukholo, njengaloo nto, luyingozi kakhulu ebomini bomntu: kukungabikho kwesizathu. Kodwa kufuneka ukhumbule ukuba inkolo yindlela yokuqala yefilosofi, ukuba okokuqala ukuzama ukuchazela indalo, ukunika ubungqina benkalo yobomi bomntu kunye nenkolelo yokuziphatha komntu, yenziwa yinkolo, phambi kokuba abantu baphumelele okanye baqhube ngokwaneleyo ukuba nefilosofi. Kwaye, njengezifilosofi, ezinye iicawa zineempawu zokuziphatha ezixabisekileyo. Bangaba nempembelelo emihle okanye imigaqo efanelekileyo yokufundisa, kodwa kumxholo ophikisanayo kwaye, ngokubhekiselele kakhulu -kufanele ndithethe njani? isisiseko okanye isisiseko: ngenxa yokholo. I-Interviewboy intetho kunye ne-Ayn Rand]
Ukholo siqalekiso esibi kunazo zonke esintwini, njengento engqinelanayo kunye nentsha yengcamango.
Ukuphumla kwimeko yekholo kuthetha ukuvuma ukuba isizathu sihlangothini lweentshaba zomntu -ukuthi azinalo izizathu zokunika ingqiqo.
IRandi ichaza indlela awayeyijonga ngayo uThixo, kwaye yayikude nendlela abakholwa ngayo. Uthe:
Kwaye ngoku ndiyabona ubuso bukaThixo, ndiphakamisa lo uthixo phezu komhlaba, lo othixo afunwa ngabantu ukususela ebantwini, lo nkulunkulu oya kubanika uvuyo noxolo kunye nekratshi.
Lo thixo, eli lizwi elinye: I. [Ayn Rand, Anthem ]
IRandi yathetha ngokude malunga nomxholo wesono sangaphambili kunye nokuba kutheni engavumelani nayo.
( Imfundiso yeSono Sokuqala ) ichaza ukuba (umntu) wadla isiqhamo somthi wolwazi-wafumana ingqondo kwaye waba yinto engqiqweni. Kwakunokwazi okuhle nokubi-waba ngumntu oziphatha kakuhle. Wayegwetywa ukufumana isonka sakhe ngomsebenzi wakhe - waba ngumlimi ovelisayo. Wagwetywa ukuba abe nomnqweno-wafumana amandla okuzonwabisa ngesondo. Izinto ezimbi (abashumayeli) azikho izizathu, ukuziphatha, uvuyo lwendalo - zonke iimpawu eziqhelekileyo zobukho bakhe.
Ngaphezu kokholo, ngaphezu kukaThixo, iRandi yayikholelwa kwisigqibo. Nantsi into awayeyithetha ngayo ngengcamango engqiqo.
[T] ulwaphulo-mthetho loqobo nje kuphela lokuba umntu oyedwa onokumelana nomnye umzamo wokudala, ngamazwi okanye kwizenzo zakhe, ingcamango yokuphikisana, into engenakwenzeka, engenangqiqo, kwaye ngokuqinisekileyo uyagubungela ingcamango yokuqonda kwixhoba lakhe.
Ukuba ndiza kuthetha ulwimi lwenu, ndiza kuthi umyalelo wodwa wokuziphatha ngumntu nguwe: Ucinga. Kodwa 'umyalelo wokuziphatha' uphikisana ngokwemiqathango. Ukuziphatha kukukhethiweyo, kungekhona ukunyanzeliswa; ukuqondwa, kungekhona ukuthobela. Imilinganiselo yokuziphatha iyingqiqo, kwaye isizathu asifumani mithetho.
Akuzange kubekho ifilosofi, inkolelo okanye imfundiso, eyahlaselwa (okanye 'ingqongqo') isizathu, esingazange sishumayele ukuzithoba kwamandla karhulumente othile. [Ayn Rand, I-Comprachicos, kwi -New Left ]
Pluto eCapricorn (2008 ukuya ku-2024) - Ubomi emhlabeni
Ukuthutha u-Uranus Aries (ngo-2010 ukuya ku-2019)
Yintoni eyenzekayo xa uSaturn e-Scorpio
Xa iVenus eseVirgo - Venus Transits
I-Forecast yokuhambisa iSaturn ukuya kuVenus kwi-Astrology
Saturn kwiSagittarius (2014 ukuya 2017) - I-Forecast
Iingcaphuno zeCarl Sagan ezibonakalisa iingcamango zakhe kwiNkolo
I-Pluto eLibra Generation (1971-1984)
Iindlela ezi-5 zokuHlola iMbali Yakho Yentsapho Yenkululeko kwiSearchSearch
Izibhalo zoMbhalo zeZibhalo: Incwadi kaMormoni
Humboldt State GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Indlela Yokubonakalisa Inzala KwiKholeji
Ihlabathi eli-10 eliphambili ngeengoma ngeenqanawa
Imisebenzi ekhethwe nguMongameli efuna ukuvunyelwa kweSenethi
Ngaba i-Mistletoe Inene?
Iintsingiselo 'zeVive la France!'
Ukuqhawula i-CompTIA Security +
Eyona ndlela ihamba phambili kwiBhola kwiBhola
UMildred Wirt Benson, u-Carolyn Keene Biography
I propaganda Maps
Iintsuku Zethu Zokuphila Ziphumelele I-Interview
Iingoma eziphezulu zeMdaniso zika-2008 - Uludwe lweengoma eziphezulu zokudanisa ngo-2008 ngokwe-DJ
Ukulungiswa kweKholeji kwiBakala lesi-9
Yintoni Eyabangela Ubunwele Bokuhamba?
Iinqununu ezithandathu zomphefumlo